Ireo lohahevitra 5 tsara indrindra mamaly premium ho an'ny Tumblr | Famoronana an-tserasera
Jesus Arjona Montalvo | | Famolavolana tranonkala, lohahevitra
Androany izahay dia mitondra ireo izay mety ho iray amin'ireo Lohahevitra 5 mamaly faran'izay tsara indrindra ho an'ny Tumblr. Raha ny lojika dia lohahevitra be io, satria miankina amin'ny filan'ny mpampiasa tsirairay ny zava-drehetra. Mandritra ny lahatsoratra dia hametraka ny rohy raha te hampidina azy, a famaritana ny lohahevitra, fa tokony ampidirinao ny rohin'ny lohahevitra mba hahitanao ny fiasa rehetra ao, ary a trondro goavambe ny fisehon'ny lohahevitra tsirairay. Manantena aho fa tianao izany.
2 2. Grid
4 4. Fanamafisam-peo
Ny lohahevitry ny Vernalis Tumblr dia an'ny a Bilaogy manokana. Vernalis manova ny bilaoginao ho lasa style style anao. Miaraka amina endrika miaraka rakotra azo namboarina mora foana, marika manokana ary configurations vaovao maro ho an'ny bilaoginao. Afaka minitra vitsy dia hanana ny fanatrehanao ao amin'ny Tumblr ianao.
Grid Is a lohahevitra tsy manam-paharoa, kely, madio, andry maro. Mora ampiasaina tokoa! Manamboara portfolio-nao na galeri-tsary. Ny lohahevitra dia manohana karazana fampiasa isan-karazany hapetraka mandritra ny lohahevitra Tumblr ary mety aminy mitantana karazana bilaogy. Azo ampiana amin'ny alàlan'ny fanamorana fomba tsy mila manoratra kaody CSS na HTML.
Tresno lohahevitra ho anao io bilaogy manokana. Ity lohahevitra ity dia mety ho an'ny bilaogera, mpaka sary, mpanao gazety, ary izay rehetra tia famolavolana, dia tena izy limpio y minimalist. Ity lohahevitra ity dia miorina amin'ny rafitra Bootstrap ary miasa tanteraka amin'ny birao, tablety ary telefaona finday.
lantom-peony tsotra tanteraka sy mamaly lohahevitra manokana izany. Mety ho an'ny mpaka sary sy portfolio-modely. Lavorary toy ny rakikira sary manokana. Ity lohahevitra ity dia miorina amin'ny rafitra Bootstrap ary miasa tanteraka amin'ny birao, tablety ary telefaona finday.
Pluto mifanaraka tanteraka amin'ny Fitaovana retina. Pluto dia manana Karazan-bilaogy 4: iray amin'ny alàlan'ny default, bilaogy, slider feno ary slider nohafohezina. Miorina amin'ity lohahevitra ity Bootstrap ary miasa tanteraka amin'ny birao, tablety ary telefaona finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Lohahevitra 5 mamaly ambony indrindra momba ny Tumblr